Hawaasa Oromo Faraansaay : waamicha sabaa -
Hawaasa Oromo Faraansaay : waamicha sabaa
Hawaasa Oromo Faraansaay 27/12/2013
125, BOULEVARD CHARONNE
Dhimma : waamicha sabaa
Kabajamtoota hogantootaa fi qabsaa’otaa oromoo, hundaafi
Bakka jirtanutti nagaan keenya haa dursu !
Bilisumma oromoo falmachuuf jettani jireenya dhuunfa dhiiftani qabsoo jireenya godhachu keessaaniif dhalli oromoo galata gudda isinii qaba.Qabsaa’ota isini biraa weereegamni waaqa kadhataa isniif baga rabbii lubbu dheersee harran isin gahee jenna.
Gara biraatin ulfini kayyoon ittin ol kaatani fi haali xaxamaan biyya sanaa akkasumas haalli adunyaa kaayyo ittin kaatan galmaan gahuu irrati dhiibbaa umee irran kan ka’e jallan bara tokko, walin qabsaa’aa turtan addan babaqaquun dhaba adda aadda jalati gurmaa’un qabsoo itti fuufa jiruu keesaan ni huubana.
Harra garu qabsoon oromoo haala hin yaadamineen bifa biraa keessa galee jira. Qabsoo jallan isnin biraa itti kufan , isin dargagummaa keesan itti dabarsitan , qaama itti dhabdan ittin hidhamtaan itti reebamtan dargagooni oromoo nu geenyee jedhaa jiru. Nus duuf qophoofnee jedhaa jiru.
Qoma qullaa ,qalama baatani meesha waraanaa baranee duraa dhaabatani oromoon fi oromian dhiiga keenyaan bilisoomti jedhaa jiru.
Dargagoon kun dhaaba himata hin jiranu , ganda himataa hinjiranu , amantaa himataa hin jiranu. Oromumma tokkumaa Bilisummaa jedhaa jiru.
Ergaa nuu dabarsaa jiru. Yoo tokko taane diinnii nu dura hin dhaabatu jedhaa jiru. Tokkuma , wal hubnoo dhaabilee siyaasa oromoo gafataa jiru.
Kanafuu , nuti Hawaasni oromoo faraansaay Marii gadi fageenya gonnen yaada kana gadi isinii dhiyeesini.
yeroo amma dhabilleen siyaasa adda addaa ibsa ijjano baasa jiru. Kun waan gaarii dha. Garu lubbu dargagoo oromoo bahaa jiruun walin wal hin maadaalu. Waan kana ta’eefu
Hogganoonni dhaabillee siyaasa oromoo hunduu garagarummaa qabanu dhiisani ummata waraanaa fi beelaan dhuma jiru qaqabuuf hatatamman walqunamun marii barbaachisu gochu.
Walin maryachuudhan dhaabileen siyaasa oromoo ijjano tokko oromoof dabarsuun qabsoo kanaaf human ta’a gara biraatin adunyaa akka nu dhaghu gahee gudfda qabaata jenne amana.
Waliigalteen dhaabilee oromoo gedduti uumamu orommo sababa walqoodu siyaasatiin manati galee akka gara qabsooti deebi’u garagaara jenne waan amanuuf qobsoo deema jiruu human kennuf walti dhufeenyi dhaabilee dirqama jenne amana.
Dhaabilleen kayyo wal irra hin faagaane qabanu adda adda dhaabachuu irra walti deebi’un qaabeenya namaas ta’ee maalaqa waliin yaalamu akkasummas humana wali ta’u jenne amana.
Kan qabsoofnu sabaaf yoo ta’e wamacha sabichaa dhagahun ummataafs ta’e dhaaboota akkasumas qabsoof haala mijjeessa uuma jenne waan amanuuf walti dhufeenya keessan gaafana.
Dhuma irrati muxanno hanga amma qabnu irraa dhaabilee addaa addaa qabaachu qofa otoo hin ta’in dhabileen siyyaasa orommo harki caalu dinna irrati hojjchuu irra wal irrati hololaa geggeesun yeroo fixuun dhiiga dorgagoota oromoo gadi namaa jiru itti qoosu waan nuti fakaatuuf walti dhufeenyii fi wal hubanooon barbaachisaa dha jenna.
Injifannoon kan ummata Oromooti !
Woldaa Hawaasa oromoo faaransaay
2 thoughts on “Hawaasa Oromo Faraansaay : waamicha sabaa”
I don’t think there is any Oromo organization or Party that is alive and capable right now, as we talk. We need to start create one from the scratch!
Tolchaan kan du’e akka boofaa biyyee arraabee ka’era ammoo. Of eegaa, waan inni jedhu hundi faalaa oromo, wanta oromo fi oromuma addaan bassuufi kkf dha. Actually warra ayyaantu beekaniif tolchaan beekamaa dha. Maqaa ormo of mogaasee oromoof kan dubbatu fakkaate, kan diinaaf dalagu ta’un isaa akka beekamu.